JRiver Media Center v17.0.106 Final Full Patch....! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ JRiver Media Center v17.0.106 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Player မျိုးစုံ လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ပါ...!32 Bit & 64 Bit နှစ်ခုလုံးမှာ သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 20.99MB ရှိပါတယ်...!Patch လေးနှင့်အတူ Install Note လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်...!ကျွန်တော် အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
1. Install JRiver Media Center
2. After installation, DO NOT run the JRiver Media Center
3. Run "jriver.mediacenter.17.0.103-mpt.exe"
(Run as administrator for vista/7)
4. Click on the image
No Response to "JRiver Media Center v17.0.106 Final Full Patch....!"